IXiaomi ivula ivenkile yayo yesibini e-Itali eRoma | I-Androidsis
UXiaomi uye wanda kwilizwe liphela ngezinga elikhulu kule minyaka mibini idlulileyo. Uphawu lwaseTshayina luvule inkitha ye iivenkile eSpain, Yeyona ntengiso yayo iphambili eYurophu. Ukongeza, kunyaka ophelileyo iye yanda yaya kwezinye iimarike eYurophu, ngokuvulwa kweevenkile zayo zokuqala e Italia kunye neFrance.
Nokuba kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo ilizwe elitsha besele lifikile eYurophu apho kwavulwa ivenkile yeXiaomi, IRomania kule meko, njengoko sikuxelela. Okwangoku, uphawu luzimisele ngamandla e-Itali, ukusukela kule mpelaveki ivule ivenkile yayo yesibini elizweni. IRoma ibe sisixeko esikhethiweyo.
Njengakwimeko yeMilan, eyayisisixeko sokuqala e-Italiya ukuba nevenkile yeXiaomi, ubheje kwindawo yokuthenga njengendawo yayo. Kuqhelekile ukuba uphawu lwaseTshayina lubheje kumaziko okuthenga ngale ndlela. Into abayiphindileyo kule meko kunye nevenkile eRoma.
Kule meko ibiyiPorta di Roma, eyiyo Elinye lamaziko abaluleke kakhulu ekuthengeni kwikomkhulu lase-Itali. Ke yindawo ephambili yohlobo lwesiTshayina. Kuba bayazi ukuba baninzi abantu abadlula kuyo. Indlela elungileyo yokufumana abathengi malunga noku.
Ukuvulwa kwale venkile yeXiaomi sele kwenzekile kule mpelaveki. Kukho ukunyuselwa, ukongeza ekubeni ubekho kakuhle. Ke kuyacaca ukuba kukho umdla kwinkampani e-Itali, imakethi apho bekhula ngesantya esihle. Kungakho iivenkile ezintsha elizweni kungekudala.
UXiaomi ugcina injongo yakhe yokuvula ivenkile eYurophu. Sibona indlela inkampani Iyanda ngesantya esihle Kwilizwekazi. Nangona ayisiyiyo kuphela intengiso yakho ekujolise kuyo. Kuba uphawu lusebenza kuvulo lwe Iivenkile ezingama-5.000 XNUMX eIndiya ngonyaka nje omnye. Umceli mngeni othembisa ukubanzima.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » UXiaomi uvula ivenkile yakhe yesibini e-Itali